Inona no atao hoe fandidiana refractive | Bezzia
Tony Torres | 13/05/2022 14:00 | Torohevitra momba ny fahasalamana, aretina
Nandritra ny taona vitsivitsy, ny olona manana olana amin'ny fahitana dia afaka mampiasa izany fandidiana refractive hanitsiana azy ireo sy hanesorana solomaso na contact lens mandrakizay. Ny fandidiana refractive dia ahitana vondron'olona fitsabahana na teknika fandidiana izay ahitsy na hanafoanana ny olana sasany mahatonga ny fiovan'ny fahitana. Ohatra, ny myopia, ny astigmatisma, ny hyperopia ary ny presbyopia amin'izao fotoana izao dia azo ahitsy ihany koa.
Fanampiana iray manontolo ho an'ny olona maniry, maniry na mila mijanona tsy manao solomaso, na ho an'ny matihanina, na ara-panatanjahantena na noho ny antony ara-estetika tsotra izao. Satria ny solomaso dia fitaovana mahafinaritra sy mahafinaritra izay manampy ny maha-izy azy amin'ny tarehy, fa ho antsika rehetra izay tsy maintsy manao izany isan'andro dia tsy inona fa fampahatsiahivana fa raha tsy misy azy ireo dia very isika.
1 fandidiana refractive
1.1 Laser refractive fandidiana, LASIK na PKR
1.2 Azo ampiasaina koa ny lens intraocular
1.3 Ahoana no ahafantarako raha afaka fandidiana aho?
Misy karazana fandidiana refractive hanitsiana olana amin'ny fahitana. Amin'ny tranga tsirairay, ny manam-pahaizana manokana no mamaritra hoe iza no mety indrindra ary na dia teknika mihoatra ny iray aza dia azo ampiharina amin'ny olona iray. Manaraka izany dia milaza aminao izahay inona avy ireo karazana fandidiana refractive, rehefa ampiasaina sy ny fomba anatanterahana ny teknika.
Laser refractive fandidiana, LASIK na PKR
Rehefa ampiasaina hanitsiana ny fiovan'ny maso izay miteraka olana amin'ny fahitana ny laser dia ny fanovana ny endriky ny cornea mba hanitsiana ny dioptera izay manakana ny fahitana marina. Ny endrika dia mety miovaova arakaraka ny diplaoma ho an'ny marary tsirairay, ohatra, rehefa mampiasa ny teknika LASIK, dia atao ireto fepetra manaraka ireto.
Mba hanitsiana ny myopia: ny atao dia ny mametaka ny curvature amin'ny laser, ka ny hazavana dia mifantoka tsara amin'ny cornea.
Amin'ny tranga hyperopia: Amin'ity tranga ity, ny sisin'ny cornea dia novolavolaina mba hamoronana fiolahana.
ho an'ny astigmatisma, ny atao dia ny mametaka ny faritra miaraka amin'ny curve lehibe indrindra amin'ny cornea mba hamela azy ho mitovy araka izay azo atao.
Raha ny atao hoe PKR fandidiana refractive, ny teknika mitovy ihany izy io fa matetika mahasosotra ny marary. Io no teknika voalohany nampiasaina hanitsiana ny olan'ny fahitana, ka ankehitriny dia nihatsara be izy io ka tsy ampiasaina matetika intsony.
Azo ampiasaina koa ny lens intraocular
Amin'ny toe-javatra sasany, raha tokony hampiasa ny laser hanovana ny cornea sy hanatsara ny fahitana, dia azo apetraka ny family na azo esorina, arakaraka ny filan'ny marary tsirairay. Izany no teknika izay matetika ampiasaina rehefa ny marary dia manana dioptera bebe kokoa noho ny navela hanao fandidiana tamin'ny laser refractive. Raha implantation ny lens dia tazonina ny lens. Amin'ny toe-javatra hafa dia esorina ny family ary apetraka ny lens aphakic, izay teknika entina hanesorana ny katarakta.
Ahoana no ahafantarako raha afaka fandidiana aho?
Afaka manao fandidiana refractive raha toa ka mila manitsy ny tsy fahampian'ny fahitana, toy ny myopia, astigmatism na hyperopia, ny marary dia tsy maintsy mahafeno fepetra sasany. Amin'ny lafiny iray, ny diplaoma dia tsy maintsy miorina mandritra ny roa taona farafahakeliny. Ny mari-pamantarana fiarovana hafa izay tsy maintsy tombanan'ny manam-pahaizana manokana amin'ny tranga tsirairay dia tombanana ihany koa.
Ny fomba tsara indrindra hamahana ny fisalasalanao rehetra dia ny mankany amin'ny fifampidinihana amin'ny manam-pahaizana manokana iray izay afaka manao famerenana sy manazava ny safidinao. Koa satria misy masontsivana maro izay tombanana amin'ny tranga tsirairay, ny filan'ny marary tsirairay sy ny mety hahazoana ny vokatra tadiavina dia mety miovaova amin'ny tranga tsirairay. Ankoatra izany, Na dia fandidiana tena azo antoka aza izy io, dia tsy misy vokany. izay tokony homena lanja koa. Apetraho amin'ny tanana tsara foana ny tenanao, hamaha ny fisalasalana rehetra. Avelao ny fotoana ahafahanao mandinika sy manapa-kevitra hoe rahoviana, amin'ny fomba ahoana ary amin'iza no tianao hodidiana mba hanafoanana ny olana amin'ny fahitana mandrakizay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » aretina » Inona no atao hoe fandidiana refractive?